बल प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीको शपथ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पढाइ र सिकाइ जोड्ने कि ?
पढाइमा विषयवस्तु जाँचिन्छ । सिकाइमा सिक्ने कला जाँचिन्छ । यो फरक बुझ्नासाथ पढाइ तथा सिकाइको समकक्षताका लागि बनाउने प्रश्नको अनुहार फरक हुन्छ ।
वैशाख २०, २०७८ विद्यानाथ कोइराला
पढाइ कि सिकाइ : हामीले खोजेको के हो ? हामी पढाउन अभ्यस्त छौं । शिक्षक त्यही हौं । प्राध्यापक त्यही हौं । तालिम दिने पनि त्यही कोटिका हौं । पढाउने तालिम दिने । अभिभावक त्यही कोटिका छौं । पढाइ तथा सिकाइमा भेद नजान्ने ।
यस अर्थमा रोबर्ट बार र जोन टाग्गले आफ्नो किताब ‘फ्रम टिचिङ टु लर्निङ’ (सन् १९९५) मा भनेजस्ता । उनीहरूका शब्दमा, ‘मुटुमा सिकाइ भएका । व्यवहारमा पढाइ भएका ।’
त्यसैले हामीले पढाइ र सिकाइ छुट्याएनौं । कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञले त यो फरक पनि जानेनौं । उनको पेसाले यो कुराको भेद नै खोजेन । त्यसैले सबैले लहर लागेर भन्यौं— पढाइ भएन । पढाइ भएन । रोबर्ट बार र जोन टाग्ग आफैं शिक्षक हुन् । उनीहरूले स्पष्ट बुझेका थिए— पढाइ भनेको दिनु हो । त्यसैले शिक्षक तथा प्राध्यापकले दिने काम मात्रै गर्छौं। गर्‍यौं । गर्नै बल गर्छौं  । यो हाम्रो अभ्यस्तताले ल्याएको नियति मात्र हो ।
सिकाइ भनेको पढाइ होइन । रोबर्ट बार र जोन टाग्गकै शब्दमा, यो त विद्यार्थीलाई सिकाइमा संलग्न गराउने कला हो । गाब्रिएला केलेमेनले सन् २०१० मा भनेजस्तो, विद्यार्थीलाई सघाउने कला हो । उनीहरूलाई थप सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो । आवश्यक पर्नासाथ विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण दिने व्यवस्था हो । यो कलामा हामीले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई तयार गरेकै छैनौं । स्वज्ञानले तयार भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू निर्णयकर्ता बन्न सकेका पनि छैनन् । पाएका पनि छैनन् ।
पढाइको विषयवस्तु के हो ? सिकाइको विषयवस्तु के हो ?
पढाइले साझा तर निश्चित विषय खोज्छ । गणित विषय । अंग्रेजी विषय । विज्ञान विषय । सामाजिक विषय । ती विषय पढाउने विषयविज्ञ खोज्छ । त्यसको पाठ्यक्रम खोज्छ । पाठ्यपुस्तक खोज्छ । यस अर्थमा पढाइले संरचना खोज्छ । औपचारिकता खोज्छ । उपलब्धिको हिसाबमा पढाएको कुरा विद्यार्थीले कति जान्यो वा कति जानेन भन्ने औपचारिक जाँच खोज्छ । ती सबै कार्यमा शिक्षकलाई तयार पार्ने तालिम केन्द्र खोज्छ । पेसा प्रवेश तालिम, पुनर्ताजगी तालिम आदि । यसको अर्थ हो— पढाइले शिक्षकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोचेको हुन्छ । ऊ दाता हो । विद्यार्थी दान स्विकार्ने पात्र हो । विद्यार्थीले कति दान ग्रहण गर्न सक्यो भनी पहिल्याउने साधन परीक्षा हो । हाम्रो अभ्यस्तता यही हो । शिक्षकको । प्राध्यापकको । कर्मचारीको । राजनीतिक दलको । अभिभावकको । अन्ततोगत्वा विद्यार्थीको । सिकाइले जेलाई पनि विषयवस्तु मान्छ ।
विद्यार्थीले जहाँ जे पनि खोज्न सक्छ । कुनै विद्यार्थीले मोही पारेको विषयवस्तु छान्न सक्छ । अर्को विद्यार्थीले सडक बालबालिकालाई विषयवस्तु बनाउन सक्छ । तेस्रो विद्यार्थीले रक्सी पारेको कुरालाई विषयवस्तु मान्न सक्छ । चौथो विद्यार्थीले चापाकलबाट पानी तानेको विषयवस्तु लिन सक्छ । यसरी हेर्दा पढाइमा शिक्षकले बनाएको वा उसलाई दिइएको विषयवस्तुमा मात्रै घोत्लिनुपर्छ । सिकाइमा भने विषयवस्तु पनि विद्यार्थीकै हुन्छ । पठनकला पनि विद्यार्थीकै हुन्छ ।
विद्यार्थीले बहु–विषयवस्तु छान्न सक्ने हुनाले सिकाइमा शिक्षक पनि सिकारु हुन्छ । हुन सक्छ । विद्यार्थीको सिक्ने वेग पनि फरकफरक हुन्छ । जस्तो, मोही पारेको विषय छान्नेले काठको गुण पढ्न सक्छ । ठेकी कुँद्ने चदारो पढ्न सक्छ । ठेकीको गणित, विज्ञान, सामाजिक र भाषा पढ्न सक्छ । मदानीको पोरा पढ्न सक्छ । त्यो पोरा, पानीघट्ट तथा बिजुलीको टर्बाइनसँग तुलना गर्न सक्छ । गणितको अनुपात पढ्न सक्छ । यही तरिका अरू विषय छान्ने विद्यार्थीमा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ हो— सिकाइमा लागेका विद्यार्थीहरूको निश्चित विषयवस्तु हुन्न । विषयमा गहिरिने क्रम पनि एउटै हुन्न । कसैले काठ मात्रै पढ्न सक्छ । कसैले चदारो मात्रै । कसैले मदानी मात्रै । कसैले मोही पार्दाका गणित र विज्ञान मात्रै । कसैले अरू केही ।
पढाइको शिक्षणकला के हो ? सिकाइको शिक्षणकला के हो ?
पढाइमा शिक्षक बोल्छन् । विद्यार्थी सुन्छन् । अभ्यस्त शैली त्यही हो । विद्यार्थीमैत्री शिक्षण गर्न अभ्यस्त भएकाहरू विद्यार्थीलाई केही समय बोल्न दिन्छन् । त्यो पनि शिक्षकले नै छानेको विषयमा । प्रविधिमैत्री शिक्षक भए केही भिजुुवल देखाउँछन् । आफू बोल्छन् । विद्यार्थीलाई बोल्न दिन्छन् । तर विषयको लिक छोड्दैनन् ।
सिकाइमा शिक्षक तथा प्राध्यापकले प्रश्न गर्छन् । विद्यार्थीले आफूले पाएको जानकारीबारे जिकिर गर्छन् । दाबी गर्छन् । जानेको विषय भए शिक्षक तथा प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई सुझाव दिन्छन् । यो किताब हेर । यो वेबसाइट हेर । यो लेख पढ । यो मान्छे भेट । नजानेको विषय भए विज्ञको खोजी गर्छन् । विद्यार्थीसँग तिनको भेट गराउने प्रबन्ध मिलाउँछन् । यस अर्थमा सिकाइमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू विद्यार्थीका सहयोगी हुन्छन् । विद्यार्थीले खोजेका बेला पृष्ठपोषण दिने । अर्थात्, चौबीसै घण्टा विद्यार्थीको सिकाइका लागि सहयोग दिन खटिइरहने । यो क्रममा विद्यार्थीलाई परियोजना दिने । अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने । प्रतिवेदन लेख्न लगाउने । अनुभवको सँगालो बनाउन लगाउने । यसको अर्थ हो— विद्यार्थी नगहिरिए गहिर्‍याउने । गहिरिए थप काममा लगाउने ।
पढाइलाई व्यवहारमा जोड्ने कसरी ? सिकाइलाई पाठमा जोड्ने कसरी ?
पढाउने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू पाठ नै पढाउँछन् । उनका निम्ति पाठमा जोड्ने चिन्ता होइन । चिन्तन पनि होइन । जीवनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने त हो । जोडिएन भने खासै गाली पर्दैन । औंला अर्कैतिर देखाए हुन्छ । पाठ्यक्रम दोषी छ । पाठ्यपुस्तक दोषी छ । शिक्षानीति दोषी छ । हामीलाई पढाउनेहरू दोषी छन् । अभिभावक दोषी छन् । विद्यार्थी दोषी छन् । सुविधा कम दिने सरकार दोषी छ । आफूचाहिँ शतप्रतिशत ठीक छौं !
पढाइ व्यावहारिक बनाउन चाहने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको प्रयासचाहिँ तीन विन्दुमा घुमेको हुन्छ । पहिलो, किताबी सिद्धान्त पढाएर व्यवहारसँग जोड्न प्रयास गर्नेहरू (रिडक्सनिस्ट) । दोस्रो, व्यवहारबाट किताबी कुरामा जोड्न खोज्नेहरू (इन्डक्टिभिस्ट) । तेस्रो, किताबी पाठ र व्यवहारलाई यता र उताबाट अर्थात् दोहोरै जोड्न चाहनेहरू (इपिगोगिस्ट) । यी तीनै थरीको चिन्तनमा किताबी पाठ प्रमुख हो । त्यसकै सिकाइ मात्र प्रमुख हो । अरू कुरा त्यही पाठमा पुर्‍याउने कला मात्रै हुन् ।
सिकाउने शिक्षक तथा प्राध्यापकले भने विद्यार्थीको सिकाइलाई पाठमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । एकल शिक्षकले त्यो काम गर्न सक्दैन । किनकि सिक्ने विद्यार्थीले एकसाथ पूर्णतामा पढ्न सक्छ । गोठालाले गाई–भैंसी पढेजस्तो । दूध पनि थाहा पाउने । बेत पनि थाहा पाउने । मोल पनि जान्ने । घिउ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने पनि थाहा पाउने । गुण–अवगुण पनि जान्ने । त्यो सिकाइबाट आफूले के गर्ने भन्ने पनि थाहा पाउने । यस अर्थमा त्यो विद्यार्थीको सिकाइ बहु–विषयमा जोडिन सक्छ । जोड्नुपर्ने पनि हुन्छ । एउटै विषयको कुरा रहेछ भने पनि अनेक पाठमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो— आंशिक जानकारी राख्ने विषयगत शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइ पढाइमा जोड्न धौधौ हुन्छ । अर्थात्, सिकाइका क्रममा विद्यार्थीले वैदिक तथा बुद्धमार्गी पुर्खाले सिकाएको तीनबुँदे शिक्षणकलाको एकसाथ प्रयोग गरेको हुन्छ । श्रवणकलाको । मननकलाको । निदिध्यासन कलाको । त्यसैले विद्यार्थी पाठमा मात्र अटाउँदैन । ऊ बाहिरिन्छ । बाहिरिने मान्छेलाई गहिरिन पनि लगाउने काममा शिक्षक वा प्राध्यापक तयार हुनुपर्छ । तब मात्र सिकाइ बलियो हुन्छ ।
श्रवण भनेको सुन्ने हो । विद्यार्थीका सुनाउने अनेकन् गुरु हुन सक्छन् । सुनेको कुरामा मनन गर्ने उसको काम हो । एकल रूपमा । सामूहिक रूपमा । गुनेको निचोडलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा निदिध्यासन हो । सिकाइका क्रममा विद्यार्थीले यो कुरा पनि खोजेको हुन्छ । यी तीनवटै काममा शिक्षक तथा प्राध्यापकले जुन बेला पनि सघाएको हुनुपर्छ ।
सिकाइ तथा पढाइलाई जाँच्ने कसरी ?
पढाइ जाँच्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफूले पढाएको कुरा विद्यार्थीले कति जान्यो वा जानेन भनी जाँच्ने हो । यहाँ जाँच्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकको ज्ञान नै प्रमुख हो । उसको नापो नै प्रमुख हो । विद्यार्थीले उसैको नापोमा जोखिनुपर्छ । तौलिइनुपर्छ । त्यसैले पढाइ जाँच्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफूले पढाएको कुरालाई केन्द्रमा राख्छ । राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न शिक्षक वा प्राध्यापकले बनाउने हो । जाँच्ने पनि उसैले हो । उही विद्यालय वा कलेजकाले । प्रकारान्तरले अर्काे विद्यालय वा कलेजकाले ।
सिकाइमा पनि जाँच्ने तिनै शिक्षक वा प्राध्यापक हुन् । प्रश्न बनाउने पनि तिनै हुन् । तर शिक्षक वा प्राध्यापकले जानेको विषयको प्रश्न होइन । प्रश्न हो— विद्यार्थीले सिर्जना गर्न सक्ने ज्ञानको । सीपको । कलाको । समस्यामूलक प्रश्न हुन सक्छ । समाधानमूलक प्रश्न हुन सक्छ । समस्या र समाधानबीचको प्रश्न हुन सक्छ । त्यही प्रश्नमा सिद्धान्त खोज्ने–खोजाउने प्रश्न हुन सक्छ । सूत्र बनाउने प्रश्न हुन सक्छ । अरू अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा चुनौती दिने प्रश्न हुन सक्छ । सबै विद्यार्थीलाई मिल्ने गरी विषयभन्दा माथि उठेको प्रश्न दिन सकिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइमा मिल्ने गरी समूहगत तथा व्यक्तिगत प्रश्न दिन सकिन्छ । बिनाप्रश्न आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर भन्न सकिन्छ । अनुसन्धानको नतिजा देऊ भने पनि हुन्छ ।
पढाइको कापी जाँच्न जानेका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई सिकाइको कापी जाँच्न कठिन हुन्छ । विषय भिन्न हुनाले । सिकाइ भिन्न हुनाले । प्रस्तुति भिन्न हुनाले । कापी जाँच्ने समय पनि धेरै लाग्ने हुनाले । यो अप्ठेरो स्थितिले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई नवीन सिकाइ पनि दिन्छ । अनुसन्धानको । परियोजनाको । प्रस्तुतिको । विश्लेषणको । सिर्जनाको । यस अर्थमा सिकाइको कापी जाँच्दा शिक्षक तथा प्राध्यापकले थप जानकारी पाउँछ । उसले आफ्नो ज्ञान तथा सीपलाई अद्यावधिक गर्न सक्छ । प्रश्न हो— अभ्यस्त कुरामै लाग्ने कि नयाँ कुराको थालनी गर्ने ?
पढाइ तथा सिकाइको समकक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
पढाइमा विषयवस्तु जाँचिन्छ । सिकाइमा सिक्ने कला जाँचिन्छ । यो फरक बुझ्नासाथ पढाइ तथा सिकाइको समकक्षताका लागि बनाउने प्रश्नको अनुहार फरक हुन्छ । एउटा उपाय हो— समकक्ष मान्ने गरी दुई भिन्न प्रश्न सोध्ने । यसले भन्छ कि, बीए र बीएससी फरक हुन् । तर समकक्ष हुन् । दोस्रो उपाय हुन्छ— सक्षमता सीपमा मात्र प्रश्न सोध्ने । यस्ता प्रश्न साझा हुन्छन् । तिनले विश्लेषण खोज्छन् । अथ्र्याइ (इन्टरप्रेटेसन) खोज्छन् । नयाँ ज्ञान खोज्छन् । सिर्जना खोज्छन् । पढाइ र सिकाइले यी कुरामा मात्रै प्रश्न गर्नुपर्छ । तेस्रो उपाय हो— स्तरीय परीक्षा लिने । सरकारसँग कक्षा ३, ५, ८, १० को स्तरीय परीक्षाका लागि चाहिने प्राविधिक प्रश्नहरू छन् । समानान्तर क्षमताका । तिनमा केही थपघट गर्दा स्तरीय परीक्षा बनाउन सकिन्छ । कक्षा १२, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि भने प्रश्नहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशकै शिक्षकहरूमा त्यो क्षमता छ । ती प्रश्नहरूको वैधता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने–गराउने हैसियत छ । नभएको चाहिँ निर्णायक व्यक्ति मात्र हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्णय दिने कि ?
शिक्षासचिवले निर्णय दिने कि ? शिक्षामन्त्रीले निर्णय दिने कि ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षले निर्णय दिने कि ? विश्वविद्यालयका उच्चस्तरीय पदाधिकारीले पो निर्णय गर्ने कि ? प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने हो कि ? विदेशी दाता वा साहू संस्थाले निर्णय दिने कि ? सबै संस्थाले समन्वय गर्ने कि ? विद्यालयका लागि छुट्टै अनि क्याम्पसका लागि छुट्टै निर्णय गर्ने कि ? पर्खाइ निर्णयको हो । निर्णय गर्न सक्ने हैसियत भएका पदाधिकारीको खोजी मात्रै हो । राजनीतिज्ञको खोजी मात्रै हो ।
समकक्षताका निम्ति स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनेकन् ‘तरकिब’ छन् । आफूले आफैंलाई जाँच्ने डिजिटल तरकिब । पहेली स्वरूपको कागजी तरकिब । शिक्षकले जाँच्ने पेसाकर्मी तरकिब । पालिकाले जाँच्ने अनुसूची ८ को संवैधानिक तरकिब । प्रदेश सरकारले जाँच्ने अनुगमनात्मक तरकिब । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जाँच्ने परम्परागत एवं अनुसूची ९ को संवैधानिक तरकिब । के गर्दा हुने हो भन्ने कुराचाहिँ निर्णायकको जिम्मा हो । जे गरे पनि विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर जाँच्ने हो भन्ने प्राज्ञिक चिन्तन हो । विश्वमा चले–चलाइएका । यीमध्ये कुनै पनि उपाय अपनाउने हो भने निजी, सरकारी तथा धार्मिक स्कुलको शैक्षिक स्तर समान बनाउने बाटो खुल्छ । कमजोर शैक्षिक स्तर भएका विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । तदनुसार वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने बाटो खुल्छ । अहिलेको दलीय ढाकछोप वा लगानीको स्वार्थमा चलेका शिक्षालयहरूको सहज नियमन हुन्छ ।
कोरोनाले सिकाएको पाठ बिर्सने कि त्यसलाई पूरक बनाउने ?
गत साल कोरोनाले एकसाथ ठूलो संख्यामा शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएको थियो । कतिपय शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले सिकाइ र पढाइको फरक बुझे–बुझाएका थिए । अभ्यास पनि गरेका थिए । कतिपयले मोबाइल, ल्यापटप, रेडियो, टीभी, अनलाइन, अफलाइनजस्ता प्रविधि तथा व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने सामग्रीहरू पनि बनाएका थिए । स्कुल तथा कलेजले नै परीक्षा लिने अभ्यास गरेका थिए । त्यहाँ आउन सक्नेलाई र नसक्नेलाई एकसाथ दुई खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाएका थिए । केहीले पाठ्यक्रम पुनर्लेखन गरी छोटो अवधिमा कोर्स पूरा गर्ने तरकिब अपनाएका थिए । कतिपयले टिकटकबाट पढाउने अभ्यास पनि गरेका थिए । त्यस्तै घरकै मान्छेले पढाउने (होम स्कुलिङ), घरैबाट जाँच दिने (टेक होम एग्जाम) तथा खुला परीक्षा (ओपन टेक्स्ट एग्जाम) पनि सञ्चालन गरेका थिए । यी सबै काममा केही कठिनाइ त थिए नै, सुधारका गुन्जाइस पनि थिए ।
कोरोनाको अर्को लहरका कारण पुन: गत वर्षको अभ्यासमा शिक्षक तथा प्राध्यापक फर्कन बाध्य भए । यो बाध्यताले केही काम गरेको छ । पहिलो, एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षाका लागि शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई तयार पार्दै गएको छ । एउटै विकल्पमा मात्र नबसी एकैसाथ बहुविकल्पमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान बनेको छ । अनलाइन, अफलाइन, टोल शिक्षा तथा घर शिक्षामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू बानी लागेका छन् । अनुसन्धान तथा परियोजनाबाट कोर्स अघि बढाउने तथा परीक्षा लिने कामको सुरुआत भएको छ ।
सिकाइमा ध्यान दिए संविधानको धारा ५० को (ज) को (क) ले भनेअनुसार, शिक्षा जनमुखी, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र उत्पादनसँग जोड्न सकिने रहेछ भन्ने चिन्तन बन्दै गएको छ । यो काम शिक्षक तथा प्राध्यापकले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बन्न थालेको छ । व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीको घरपरिवारका सीपहरूको प्रोफाइल मात्रै बनाए पनि सीप सिकाउने स्रोतव्यक्ति आफ्नै नजिक रहेछन् भन्ने मान्यता बनेको छ । यी सबै सकारात्मक मान्यताहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने तथा बढाउने निर्णयकर्ताको खाँचो छ । त्यो खाँचो पूरा गरे हामी अग्रगामी बन्छौं । हैन भने गफगामीमै टुंगिन्छौं । मर्जी निर्णयकर्ताहरूको !
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०८:०१